က Norton Internet Security 22.10.1.10 အတူ crack 2018 serial သော့ချက်များ [torrent]
နေအိမ် » antivirus & လုံခွုံရေး » က Norton Internet Security 22.10.1.10 အတူ crack 2018 serial သော့ချက်များ [torrent]
အားဖြင့် Anastasiya Libra | ဇန္နဝါရီလ 8, 2018
က Norton Internet Security Crack ဆော့ဖျဝဲတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသော Anti-malware စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အင်ဂျင်ဖြစ်ပါတယ်. ဒီဆော့ဗ်ဝဲဗိုင်းရပ်စ်ဆန့်ကျင် Real-time အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးသည်, trojans နဲ့, စပိုင်ဝဲ, ပိုးကောင်များ, နှင့် Rootkits များနဲ့. ဒါဟာတက်ကြွသောကာကွယ်ရေး module ကိုမသိသောခြိမ်းခြောက်မှုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်သူကို SONAR နည်းပညာရှိပါတယ်. က Norton လုံခြုံရေး 2018 product key ကိုလည်းအီးမေးလ်များကိုအင်တာနက် browsing နဲ့လက်ငင်းစာတိုပေးပို့အစီအစဉ်များအတွက် filter တစ်ခုအဖြစ်အလုပ်ဖြစ်တယ်. ထို့အပြင်, က Norton Antivirus ကိုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေနဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ downloads, ပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်, အဖြစ်က Norton အင်တာနက်လုံခြုံရေး product key ကိုမီးစက်, ကို 'အသံတိတ် Mode ကိုတပ်ဆင်ထား’ configuration ကို option ကို.
က Norton Internet Security Crack ဆော့ဖျဝဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကောင်းဆုံးက Facebook ကိုမြို့ရိုးကိုလေ့လာဆန်းစစ်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ, ကျယ်ပြန့်ဒီနေ့ခေတ် malware ကိုပြန့်ပွားများအတွက် tool ကိုဖြစ်လာသော. က Norton လုံခြုံရေး 2018 product key ကိုဆော့ဝဲတစ်ခုအဆင့်မြင့်ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေးသောက Norton ပါဝါ Eraser ကိုတပ်ဆင်ထား. ဂန္စကင်ကိုတခါတရံစွပ်စွဲကြောင့်သူတို့ကိုသတ်ပစ်စစ်ဆင်ရေးအတွင်းလာစနစ်တိုက်ခိုက်ခံရမူကြောင်းကို malware ကိုသတ်အံ့သောငှါပျက်ကွက်သည့်အခါ. က Norton Internet Security Crack ဆော့ဝဲလည်းသင့်ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုအဘို့အ phishing မှလူသိများသည့်မလုံခြုံတဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေကနေသင်တို့ကိုကာကွယ်ပေးသည်. antivirus ကိုထုတ်ကုန်နေ့ထူးခြားတဲ့နည်းပညာများတစ်နေ့သုံးပြီးနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်လာအဖြစ်, ဟက်ကာများ phishing အပေါ်ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်စတင်. သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဖော်သို့လူသားမြားသညျမြူဆွယ်နေတဲ့ကွန်ပျူတာဟာ operating system ကိုအရူးလုပ်ဖို့ထက်အများကြီးပိုလွယ်ဖြစ်သောသူတို့ကိုဆန့်ကျင်အသုံးပြုသွားမည်နိုင်ပါသည်.
က Norton Internet Security Crack ဆော့ဗ်ရဲ့ဝိပဿနာ module တစ်ခု function ကိုဖိုင်တွေနဲ့ပြေးဖြစ်စဉ်များကိုပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး. ခွဲခြားစိတ်ဖြာပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဖြစ်ကြောင်းသူတို့အား classifies scan ဖတ်ခံရခြင်းမှသူတို့ကိုချန်လှပ်, ဒီလမ်းအတွက်စနစ်တစ်ခုမှရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များကိုအကောင်းဆုံး. ကနဦးမျက်နှာပြင် display ကိုအဆိုပါစနစ်၏လုံခြုံရေးအဆင့်အတန်းကိုခြုံငုံသုံးသပ်ဖြစ်ပါသည်. က Norton Internet Security Crack program ကို၏အဓိက features တွေအမြန် access ကိုပေးသည်: '' Scan ကို,’ '' တိုက်ရိုက် Update ကို,’ နှင့် '' အဆင့်မြင့် Settings များ.’ မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်, သင်သည်အခြားက Norton ထုတ်ကုန်အမြန်လင့်များရနိုင်, ထိုကဲ့သို့သော Android အတွက်က Norton အွန်လိုင်း Backup ကိုနှင့်မိုဘိုင်းလုံခြုံရေးအဖြစ်. ယင်းက Norton အင်တာနက်လုံခြုံရေးအက်ကွဲထုတ်ကုန်၏ interface ကိုသော့ချက််ဖြစ်ပါသည်, ပညတ်တော်တို့ကိုမှတုံ့ပြန်မှု, နှင့်ဒီဇိုင်းအသုံးပြုသူများအတွက်လှပကြော့ဖြစ်ပါသည်. က Norton အင်တာနက်လုံခြုံရေး product key ကိုမီးစက်က Norton ကနေရရှိနိုင်မရှိမဖြစ် antivirus ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပါတယ်, ထိုသို့သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ် laptop ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့တဦးတည်းလုပ်ပိုင်ခွင့်လိုင်စင်နှင့်အတူကြွလာ. သင်ပင်သင့်မိုဘိုင်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ဒီလိုင်စင်ကိုသုံးနိုင်သည်.
က Norton Internet Security Crack အင်္ဂါရပ်များ
အန္တရာယ်များကို Android apps များနှင့် ပတ်သက်. သတိပေးချက်များသင်ကသူတို့ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်မတိုင်မီ.
အသုံးဝင်သော, ခေတ်သစ် interface နဲ့အစွမ်းထက်စကင်အင်ဂျင်ကို.
နောက်ဆုံးရမည့်အင်္ဂါရပ်တက်ကြွသော SONAR နည်းပညာ.
နေရာလွတ်သင့် hard drive ကိုဖွင့်သန့်ရှင်းရေး.
ဒါဟာဆိုရှယ်မီဒီယာ Scan ကိုမှသင်တို့ကိုအကာအကွယ်ပေးတယ်.
ဒါဟာဒီနေ့နဲ့မနက်ဖြန်ရဲ့ online ခြိမ်းခြောက်မှုများနှစ်ဦးစလုံးရပ်လိုက်.
သင့်ရဲ့ Facebook ကိုနံရံနဲ့မော်နီတာစနစ်ကစွမ်းဆောင်ရည်ဖတ်.
က Norton အင်တာနက်လုံခြုံရေး Crack လုပ်နည်း?
Download Norton Internet Security နှင့်အတူအက် 2018 Key ကို Generator ကို
က Norton အင်တာနက်လုံခြုံရေး Install လုပ်ပြီးဖွင့်ပါဘူး.
သော့ချက် Generator ကို run ခြင်းနှင့်အမှတ်စဉ်သော့ generate
Download Norton Internet Security 22.10.1.10 အတူ crack 2018 serial သော့ချက်များ [torrent]
← MacBooster6ရိုက်သံ VCE စာမေးပွဲ Simulator 2.4 ရိုက်သံ →
နောက်ဆုံးရ Cracked Find
ကျွန်တော်တို့ကို subscribe ဖို့သင့်ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာကိုရိုက်ထည့်ပါ.